Matt Harchick - NAB Bonisa izindaba ngokusakaza Beat, Umsakazo osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Umbhali Wezincwadi: Matt Harchick
Umbhali Wezincwadi: Matt Harchick
2019 #NABShow: Robot, Ungakwazi Ukushayela Imoto Yami
Kungakhathaliseki ukuthi ubabiza ngokuthi izimoto zokuzishayela, izimoto ze-robot, noma izimoto ezingenawo umshayeli lezi zimoto zokuzwa kwemvelo ziyakwazi ukushayela ngaphandle kokungena muntu. Izinzuzo ezingenzeka ukuthi abenzi bemoto bazama ukufeza izindleko zokulungisa ezincishisiwe nokuphepha okukhuphukile ngokunciphisa ukushayisana kwemigwaqo. Izindlela zokulawula eziphambili zikhomba izindlela zokuhamba, zisebenzisa izinhlobonhlobo zamenenja ...
I-2019 #NABBonisa: I-ATSC 3.0 Idlulisela Emhlabeni Wonke
Ikomidi le-Advanced Television Systems (ATSC) likhiqize amakhasi angaphezu kwe-1,000 emibhalo equkethe amazinga cishe we-20 we-version enkulu ye-ATSC 3.0. Njengoba siyazi, ukuthunyelwa kokuqala kwe-ATSC 3.0 kwenzeka eNingizimu Korea (Meyi 2017) ekulungiseleleni i-2018 Winter Olympics. Lapha, emazweni, ukukhishwa kwe-Federal Communications C kuvunyelwe iziqondiso ezivumela ukusakazwa ...
I-2019 #NABBonisa: i-ESPORTS iqhubeka ikhula!
Okuhlangenwe nakho kwe-ESPORTS kuye kwaba yinto ekhulayo emhlabeni wonke okwenza ukuba kube khona ama-depth emigqeni emikhakheni yokwenza imali. Ukukhula okulinganisiwe kokubukwa kwe-2019 kulindeleke ukuthi kufinyelele ku-427 million. Imibiko inqume ukuthi ngo-Ephreli 2017, i-42% yemakethe yokudlala iyimiboni yeselula, futhi amapulatifomu eselula anikezwa ukubiza okungaphezulu kuka-50% emakethe ngo ...
I-2019 #NABBonisa: 5G Ukufika Idolobha Elikuzungezile!
Amadolobha athile ezweni lonke ahlangabezane nensizakalo yeselula ye-5th enamazinga aphezulu wedatha, ukunciphisa ekugcineni, ukulondoloza amandla, ukunciphisa izindleko, amandla okusebenza kwesistimu, nokuhlanganiswa kwedivayisi enkulu. Isigaba sokuqala sokucaciswa kwe-5G ekuqedweni kwe-Release-15 kuhlongozwa ngo-Ephreli 2019 okuzobhekana nokuthunyelwa kwezokuhweba kwangaphambili 5G umkhuba wamaselula wansuku zonke ...
I-2019 #NABShow: Intelligence Intelligence: Ikusasa Lethu Elilindelekile Lona Lona Okwamanje
I-Intelligence Intelligence ingxenye emhlabeni wethu akuseyona ingqondo yesikhathi esizayo. Liye lafudukela masinyane enhliziyweni yokukhiqiza kokudala. I-A ingadala futhi ibhale izingoma ze-pop, ingasetshenziselwa ukubika izindaba zokuphulwa, futhi iqoqe izinhlelo zangempela zokukhipha ukungakhethi, ukudala umugqa ophelele wezinhlelo zethelevishini. Isivinini esifisa kuso ...
I-Lawo iqala izimemezelo ezinkulu zomkhiqizo ku-BVE2019!
I-Lawo, umkhiqizi waseJalimane nomkhiqizi we-IP yokuphayona, ukulawula, ukulalelwayo, ubuchwepheshe bevidiyo nevidiyo yezokusakaza bukhoma, studio nokwenza ubuciko, ukhethe ukubonisa kwe-2019 BVE njengesiphakamiso sokukhululwa okukhulu kwemikhiqizo yokusakazwa kwe-IP, okwengeza kwi-IP yezobuchwepheshe . Imikhiqizo emisha ifaka phakathi kwezivakashi zokusetha zokukhiqiza ezikude ziyamenywa ukuba zibone ku-BVE ...
I-2019 #NABShow: I-Broadcast Education Association: Imfundo & Industry #BEAvegas
I-Broadcast Education Association iyinhlangano yemidlalo yobuciko egxila emisebenzini yocwaningo lokufunda. Lokhu kuyimfuneko kubothisha nabafundi ngokufanayo ukuthola ama-labs okuqeqeshwa kwama-software mahhala, iseluleko somsebenzi kubafundi abaqhamukayo (ikusasa lethu) futhi kwenzeka kusukela ngo-Ephreli 6th kuya ku-9th e-Westgate Las Vegas Resort. Ukusebenza ngokubambisana no #NABShow 2019, lokhu ...
I-2019 #NABBonisa: I-Media Entertainment Technology Izingqungquthela Nezifundo
#NABBonisa ukuthi i-2019 igcwele izingqungquthela ezifundisayo kanye nezikhathi abaholi abagubhiweyo abazokwazi ukwabelana ngazo ngokuhlangenwe nakho kwabo okuhlukile, amasu akhethekile, nezixazululo ezinkingeni. Lona yindawo yokucwenga amakhono akho, futhi uphefumulelwe amandla ukushayela umsebenzi wakho. Sakaza Ingqungquthela Yezobunjiniyela Nezobuchwepheshe Lolu hlelo oludumile lenzelwe abanikazi bokusakaza nabachwepheshe, abaphathi bezobuchwepheshe bezindaba, ...
U-Alan Alda ukuthola i-2019 #NABShow Award Service Award
Umbukiso we-2019 NAB ukhahla ngoMsombuluko, ngo-Ephreli 8th futhi uzofaka isethulo se-Award Service Award ku-Alan Alda kanye ne-Opening Keynote kanye ne-State Address ekheli le-Gordon Smith, uMengameli kanye noMphathi we-National Association of Broadcasters. Vula kubo bonke ababemi ababhalisiwe ne-All-Badge Access ku-Stage Main. Njalo ngonyaka, i ...
I-Las Vegas SuperMeet iVumela ukuThola
Ngemuva kokugijima kokumangalisayo kweminyaka engu-18 yokuxuba, ukuxhuma, nokujabulela ama-cocktail ambalwa kanye namaqembu nabangane bemboni, i-Las Vegas SuperMeet yonyaka iphelile. I-SuperMeet inikeze umphakathi wokuthunyelwa nokukhiqiza ithuba lokungafundi nje ngezindlela zamuva zethekhnoloji, kodwa futhi ukuxhumana nokwabelana ngezindaba zomkhakha kanye namathuba ku-...
I-One and Only, uRobert De Niro Ukuvula Keynote #NABSHOWNY
URobert De Niro (udinga ukuthi ngithi okuningi) uzobe ubeka phambili i-2018 Show Opening ku-NAB Bonisa eNew York. I-De Niro iyinhloko yomhlaba wokukhiqiza (kokubili phambi nangemuva kwekhamera) iqinisa ngokuphelele amashumi eminyaka okuhlangenwe nakho embonini yokuzijabulisa. Ingxoxo kaDe Niro yomlilo izobe ihlolwe nguDade Hayes, Okufaka Umhleli - I-Deadline Hollywood ...